စိုင်းစိုင်းအကျီင်္ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ဆွဲဖြဲလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး - ACHITLWINPYIN
Homeအနုပညာရပ်ဝန်းစိုင်းစိုင်းအကျီင်္ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ဆွဲဖြဲလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
April 1, 2018 Kwee Thiha အနုပညာရပ်ဝန်း 0
မြန်မာနိုင်ငံက ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေး နဲ့ အောင်မြင်မှုကို အချိန်ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အရွယ်သုံးပါးအားပေးတာခံရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တို့က ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တော်တော်များများက သိရှိကြပါတယ် ။ မကြာခင်မှာ စိုင်းစိုင်းရဲ့ ” စိုင်းစိုင်း ဟုခေါ်သည် ” သီချင်းခွေလေးကို ဖြန့်ချိတော့မှာပါ ။
တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထုတ်တတ်သူမို့ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကလည်း အခွေမထွက်ခင်ထဲက ကြိုတင်ဝန်းရံကြပါတယ် ။ စိုင်းစိုင်းက သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက် ” စိုင်းစိုင်း ဟုခေါ်သည် ” အမှတ်တရ အင်္ကျီလေးတွေ ထုတ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးတာမို့ ဒီ အကျီင်္လေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေ ရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တင်ကာ စိုင်းစိုင်းကို အားပေးကြပါတယ် ။
၀န်းရံသူတွေထဲ မင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးလဲ တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါ ။ ဖက်ရှင်မှာ လူစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးပီပီ စိုင်းစိုင်းရဲ့ လက်ဆောင် အကျီင်္လေးကို ဖွေးဖွေးကတော့ ဒီတိုင်းမဝတ်ဘဲ ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြဲပြီး ဒီဇိုင်းသစ် ထွင်ဝတ်ပြခဲ့တာပါ ။ နဂိုလှတဲ့ မင်းသမီးလေးမို့ တီရှပ်လေးကို ဒီဇိုင်းပြောင်းဝတ်ပြန်တော့လဲ လန်းနေရောပါပဲ ။ ဖွေးဖွေးရဲ့ ဒီဇိုင်းလေးကို ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သဘောကျနေကြလေရဲ့ … Myanmarload ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဘယ်လိုသဘောရလဲဗျိုး ?
သတင်းအရင်းမြစ် : Phway Phway
မွနျမာနိုငျငံက ထိပျတနျးမငျးသမီးတှထေဲက တဈလကျဖွဈတဲ့ မငျးသမီးလေး ဖှေးဖှေး နဲ့ အောငျမွငျမှုကို အခြိနျကွာရှညျစှာ ထိနျးသိမျးထားနိုငျပွီး အရှယျသုံးပါးအားပေးတာခံရတဲ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျတို့က ခငျမငျရငျးနှီးသူတှဆေိုတာ သူတို့ရဲ့ ပရိတျသတျတျောတျောမြားမြားက သိရှိကွပါတယျ ။ မကွာခငျမှာ စိုငျးစိုငျးရဲ့ ” စိုငျးစိုငျး ဟုချေါသညျ ” သီခငျြးခှလေေးကို ဖွနျ့ခြိတော့မှာပါ ။
တဈနှဈမှ တဈခါသာ တဈကိုယျတျောအခှေ ထုတျတတျသူမို့ သူ့ပရိတျသတျတှကေလညျး အခှမေထှကျခငျထဲက ကွိုတငျဝနျးရံကွပါတယျ ။ စိုငျးစိုငျးက သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေအေတှကျ ” စိုငျးစိုငျး ဟုချေါသညျ ” အမှတျတရ အကငြ်ျီလေးတှေ ထုတျပွီး လကျဆောငျပေးတာမို့ ဒီ အကြီင်ျလေးတှနေဲ့ ပုံလေးတှေ ရိုကျပွီး လူမှုကှနျယကျပျေါတငျကာ စိုငျးစိုငျးကို အားပေးကွပါတယျ ။
ဝနျးရံသူတှထေဲ မငျးသမီးလေး ဖှေးဖှေးလဲ တဈယောကျအပါအဝငျပါ ။ ဖကျရှငျမှာ လူစိတျဝငျစားခံရတဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးပီပီ စိုငျးစိုငျးရဲ့ လကျဆောငျ အကြီင်ျလေးကို ဖှေးဖှေးကတော့ ဒီတိုငျးမဝတျဘဲ ကတျကွေးနဲ့ ဖွဲပွီး ဒီဇိုငျးသဈ ထှငျဝတျပွခဲ့တာပါ ။ နဂိုလှတဲ့ မငျးသမီးလေးမို့ တီရှပျလေးကို ဒီဇိုငျးပွောငျးဝတျပွနျတော့လဲ လနျးနရေောပါပဲ ။ ဖှေးဖှေးရဲ့ ဒီဇိုငျးလေးကို ပရိတျသတျတှကေတော့ သဘောကနြကွေလရေဲ့ … Myanmarload ပရိတျသတျကွီးရော ဘယျလိုသဘောရလဲဗြိုး ?
သချိုင်းကုန်းကအသားနဲ့ စည်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ စည်တစ်ခါထုတိုင်း မသာတွေများ တန်းစီမလားဟု ဝေဖန်မှုများရှိနေ